IFTIINKACUSUB.COM: Cabdi Idaan Faarax IHN waxa uu yidhi:Shan Soomali oo wada socdoo Calan ku sheekaysa
Cabdi Idaan Faarax IHN waxa uu yidhi:Shan Soomali oo wada socdoo Calan ku sheekaysa
Gabaygani Shiinley waxa uu bilaabay, markii ay joogsatay Silsiladii la magac baxday ’’ Siinley’’ kadib markii dawladii Kacaanku ay u aragtay in ay Siinley ay tahay mid iyada loola danleeyahay , taasi oo marka sida xaqiiqda ah la eego aan ahayn.
Cabdi Iidaan isaga oo Aftahanadiisa adeeg sanaaya ,ayaa waxa uu gabaygan Shiinlay ku bilaabay ama uu hal-qabsi uga dhigay ,erayga Shibanaha ah ee SH(shiinka) eraygaasi oo uu ku doortay,kadib markii ay Silsiladii Siinlayda ay soo galeen ama ay Gabay-lamood ka tiriyeen, dad aan markaasi ehel u ahayn ,habka iyo hanaanka loo gabyo,Abwaankuna uu u arkaayey in aanay dadkani ahayn kuwo isaga la mustawa ah.
Erayga SH ama Shiinka,oo marka afka Somaliga la eego, ay adag tahay sida loogu Gabyaa,ayaa Abwaanku waxa uu u doortay in uu ku xakameeyo kuna horjoogasado ,dadkii uu isagu markaasi u arkaayey in ay yihiin ,kuwo aan si sax ah u faham sanayn heerka iyo ujeedada laga gabyaayo,amaba silsilada usoo galay in ay kusoo caabaxaan.
Waxa uu yidhi :-
Shinbir-Dharabtu meel Aar fadhiyo shuuqa kama deynne
Waxa badawgu SHa’allaah u yidhi sheeg haddaad garato.
Abwaan wuxu murtidi uga shakiyey sheeg haddaad garato.
Ee ay beentu shaaraca ku timi sheeg haddaad garato.
Shaf-dhiggiisu meeshuu hirdiyey sheeg haddaad garato.
Halka shalaxda lala maaggan yahay sheeg haddaad garato.
Wuxu Shamacba taaggii u huray sheeg haddaad garato.
Sharcigi lagu qaban lahaa meelu jiro sheeg haddaad garato.
Inta Shaqalka gaabani u jiro sheeg haddaad garato.
Waxay Sharadi meesheed u tahay sheeg haddaad garato.
Waxay sheeka-baraleeydu tahay sheeg haddaad garato.
Shabeelkiyo Orgigu waa heshiis Shiibba dhega yaabka
Shullo maran la dhigaybaa jirtee sheeg haddaad garato.
Shan Soomali oo wada socdoo Calan ku sheekaysa
Shinmaa la arkayaa waa su’aal sharad ka yaallaaye.